प्रतिवाद गरि भने कसरी सामना गर्ने भन्ने योजना पनि बुन्दैथियो - Wonder Ideas
प्रतिवाद गरि भने कसरी सामना गर्ने भन्ने योजना पनि बुन्दैथियो
म लीलातिर कोल्टे फर्किएं, लीला मस्तरुपमा सुतिरहेकी थिई । उसको मुख हल्का खुला थियो र मुखबाट बाहिर निस्केको मादक सासले मेरो अनुहारमा न्यानोपना थपिरहेको थियो । उसका ओंठहरु एकदम रसिला चुसिरहुँ जस्ता लाग्ने देखिएका थिए, विशेषगरि उसको ओंठको गुलाबी रंगले मेरो शरिरमा यौन तरङ्ग थप्दै थियो, लीलाका छातीमा रहेका दुई चुचुरा सास लिँदा र छोड्दा फूल्ने
र सानो हुने गर्दै थिए भने फुल्दाको बखत स्तनका निपल टि-शर्ट छेडुँला झै गर्दैथिए । मैले विस्तारै आफ्नो हातलाई लीलाको पुठ्ठामाथी राखे, लीलाबाट कुनै प्रतिकृया नआएपछी मैले हत्केलाले विस्तारै लीलाको पुठ्ठा सुमसुम्याउन सुरु गरें । यस्तरी खेलाउँदा खेलाउँदै मेरो पुरुषले आफ्नो पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । निकैबेरमा लीला अर्कोपट्टी कोल्टे फेरी, अब उसको ढाड मपट्टी फर्किएको थियो । यसले मलाई अझै सजिलो बनाइदिएको थियो, मैले लीलाको तिघ्रा सुमसुम्याउन थालें, लीलाबाट कुनै प्रकारको प्रतिकृया आइरहेको थिएन । मेरो उत्तेजना बढिरहेकै थियो र मेरो लाँडोले लीलाको चाकतिर स्पर्श गरिरहेको थियो, मैले आफ्नो हातलाई विस्तारै लीलाको तिघ्राबाट सुमसुम्याउँदै मास्तिर सार्न थालें । लीलाको तिघ्राबाट कमरमा पुगेपछी म रोकिएँ र लीलाको पेट र पेन्टीमाथीको भागसम्म सुमसुम्याउन थालें ।
निकै वर्षपछी १७ वर्षकी कलिली तरुनीको शरीरसँग खेल्न पाउँदा म आफैंमा दङ्ग थिएं तर भित्र एक कुनामा लीलाले प्रतिवाद गरि भने कसरी सामना गर्ने भन्ने योजना पनि बुन्दैथियो । सुमसुम्याउने क्रममा मैले लीलाको हाफ पेन्टको बटन खोलिदिएं अनि अरु बटन पनि क्रमश: खोल्दै गएं । त्यसपछाडी मैले हल्कासँग लीलाको बटमलाईन भन्दा तल हात छिराएर सुमसुम्याउन थालें । लीलाको कमरमुनि जाँठा नआएको त पक्कै होइन शायद: उसले वाक्सिङ्ग गरेर रौं फालेकी हुँदो हो, निकै मुलायम र कोमल थियो उसको त्यो भाग । मैले हातका औंलालाई अझै तल सारें र चिरिएको भागसम्म पुर्*याएं, उसको पुती हल्का चिप्लो पदार्थ छोडिरहेको रहेछ, मेरो स्पर्शले लीलालाई हल्का उत्तेजनामा ल्याईरहेको स्पष्ट थियो । म अघि बढ्न अझै लालायित हुँदै हातलाई लीलाको पुतीबाट निकालेर माथीतिर सहलाउँन थालें र हातलाई माथी माथी सार्दै गएं । बिस्तारै मेरो हात लीलाको नाभीभन्दा मास्तिर बढ्दै गयो । एक हिसाबले त लीलापनि
आज रक्सीको मातमा थिई, त्यही सोचेर म अझै अगाडी बढ्ने निश्चय गर्दै हातलाई माथी सारें । लीलाको टि-शर्टले अलिक असजिलो महसुस भइरहेको थियो, मैले हात टि-शर्टबाट बाहिर निकालें अनि टि-शर्टको फेरो समातेर बिस्तारै टि-शर्टनै माथी सार्न सुरु गरें । लीलाको टि-शर्ट मैले निकैनै माथी सारें र झण्डै लीलाको बुब्सको माथी पुगेपछी टि-शर्ट सार्न गाह्रो हुन थाल्यो । दबाबका साथ सार्दा ठूलै चुनौती थियो, मैले टि-शर्ट त्यतिकै छोडेर लीलाको बुब्समुनि सम्म हात चलाउन थाले । त्यसो गर्दागर्दै लीला हल्का चलमलाई जसले मलाई झसँग बनायो । तर लीला तुरुन्तै सान्त भएपछी मैले उसको टि-शर्ट तिर हेरें, “ओफ…!” यतिखेर लीलाको बेडतिर टाँसिएको टि-शर्टको भाग खुल्ला जस्तो लाग्यो र मैले टि-शर्टलाई अझै माथी सार्ने प्रयत्न गरें, सहजै रुपमा लीलाको टि-शर्ट बुब्सभन्दा निकै माथी सर्केर गयो । मलाई अर्कै तवरले सोच्न बाध्य बनायो “के ? लीला मलाई सहयोग गरिरहेकी छ त ?”
यदी लीलाले मलाई सहयोग गरेको भए ऊ पनि कामवासनामा लिप्त हुन चाहन्छे भन्ने स्पष्ट थियो । तर यो सबै संयोग पनि त हुन सक्थ्यो, फेरी आफ्नै बुबा भएकोले लीलाले मसँग त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षानै नगरेको पनि त हुन सक्थ्यो । यहाँनेर जे पनि हुनसक्थ्यो, त्यसकारण मैले लीलाको बुब्सलाई आफ्नो हत्केलामा समेट्ने कोशिस गरें, आहा मुलायम अनि कोमल झण्डै टेबुलटेनिसको बल जत्रो लीलाको बुब्सलाई म हल्कासँग दबाउँदै छोड्दै गरिरहेको थिएं । लीलाको शरीरमा उत्तेजना थप भइरहेको थियो, मैले पालैपालोसँग लीलाको दुबै बुब्सलाई दबाइरहेको थिएं । निकैबेर खेलाइसकेपछी म बेडबाट उठें र लीलालाई उत्तानो पारें अनि लीलाको बुब्समा मुख लगेर जोड्दै चाट्न थालें, बुब्सको माथी देखिएको गुलाबी घेरामा जिब्रो घुमाउँदै मैले चुसिरहें । लीलाका निपल्सहरु कडा हुँदै गईरहेका थिए । मैले
एक कदम अगाडी बढ्दै लीलाको एउटा बुब्स मजाले समाउँदै अर्को बुब्स चुस्न थाले । लीलाको शरीरमा कसमसाहट बढ्दो थियो । मैले लीलाको बुब्स निकैबेरसम्म चुसिरहें अनि लीलाको कमरबाट बटन पहिले नै खुलिसकेको हाफ पेन्टलाई विस्तारै तल तिर सारें र लीलाको पुतीलाई निकैबेर नियालें । लीलाको पुती हेरिरहँदा नै मलाई उसको पुती पनि चाट्न मन लाग्यो, मैले चोर औंला लीलाको पुतीको चेपमा धर्सो ताने झैं गर्दै एक चरण माथील्लो सतहदेखि तलसम्म पुर्*याँए । लीलाको मुखबाट पहिलो पटक उत्तेजना बाहिर निस्क्यो “ऊऽऽऽ…हँऽऽऽ“ म एकछिन त झसँग भएँ अब बर्बादै हुने भयो भनेर तर पनि केहिबेर म सान्त मुद्रामा बसिरहें । लीलाले त्यसभन्दा अरु केहि गरिन, मेरो औंलामा लीलाको पुतीबाट निस्केको योनीश्राव लागेको थियो, विस्तारै त्यो औंला चुसेर लीलाको टाङ्ग फट्याएँ अनि निकैबेर हेरेर सिधै उसको पुतीमा जिब्रो जोडें ।
लीलाको पुतीको चलायमान अवयव (टि.सी.) लाई मैले जिब्रोले राम्रैसँग चाटिदिदैं सफा गरें, लीलाको मुखबाट फेरी सित्कार छुट्यो । अब चाँही जे पर्ला पर्ला भनेर मैले एउटा हातका औंलाले लीलाको पुती फ्याँ पारे र जिब्रो जोडेर लगातार चुसिरहें । लीला छटपटाईरहेकी थिई, मलाई विश्वास भयो लीलालाई रक्सीको नशाले नै छोडेको छैन । मैले आफ्नो चुसाइलाई जारी राखें, अचानक लीलाका दुबै हातले मेरो टाउकोलाई समाएर झनै पुतीभित्र गाड्न थाले । यो मौकालाई मैले किन छोड्थें र ? मैले जिब्रोलाई लीलाको पुतीभित्र पुग्न सक्ने छिर्न सक्ने सम्म छिराएर चुसिदिएँ । केहिबेरमै लीलाले पुतीबाट पानी छोड्न थाली, लीला केहिबेर शान्त भई र हत्तासमा जुरुक्क उठेर बोली “ड्याड व्हाटआर यु डुइङ्ग विथ मी… माई गड ! आई एम नेकेड…” लीलाले मलाई आफूबाट छुट्याई र तुरुन्त हाफ पेन्ट लगाई अनि टि-शर्ट पनि तल झारी
। म एकछिन सम्म चुप रहिरहें, लीलाको मुहार रुनमात्र नसकेको अवस्थामा थियो, उसका आँखाबाट आँशु टिलपिल टिलपिल भइरहेका थिए । धन्य तेतिबेला म पनि नाङ्गै भएको भए, लीला अर्कै अवस्थामा हुनसक्थी । केहिछिनपछि मैले मुख खोलें “सरी नानी ! म रक्सीको तालमा शीला भनेर तिमीमाथी…” “ओके ! ओके ! ड्याड, लिभ ईट एण्ड फर्गट ईट…” “नानी ! प्लिज कसैलाई नभन है… बेहोसीमा मैले …” “लिभ ईट ड्याड ! लिभ इट ! आई क्नो योर प्राब्लम्… लेट्स फर्गट ईट… अब तपाई सुत्नुस् भोली बिहान निद्रा नपुगेर गाडी चलाउन नसक्नुहोला नि ? तपाईको निद्रा पुगेपछी म सुत्छु… ईट्स माई फल्ट मैले नै तपाईलाई सँगै सुतौं भनेर गल्ती गरें ।“ त्यसपछी लीला बेडको एकछेऊमा खुट्टामा चिउँडो अड्याएर बसिरही । निकैबेरसम्म निद्रा नलागेपछी मैले उसलाई विन्ती गर्दै भनें “नानी !
तिमी सुत… तिम्रो निद्रा पुगेपछाडी म सुतौंला बरु.. भोली दिउँसोतिर विस्तारै गए भइहाल्छ नि कै नै बित्दो छ र ?” अनि लीलालाई बेडमा सुताएर सिरक ओडाइदिएं । म बेडबाट अलि पर रहेको चेयरमा जान लाग्दा लीलाले मेरो हात समाती र भनि “ओके ड्याड्… तपाई पनि सुत्नुस् मात्र यति विचार गर्नुस् कि म तपाईको छोरी हो वाईफ होइन…” अनि मलाई बेडमा तानेर सुताउने कोशिस गरि । लीलाले यति सहजै सबै कुरा स्विकारेको देख्दा म एक ढंगले दंग पनि थिएं, अनि अघिको मेरो हर्कतलाई पनि मैले सौभाग्यकै रुपमा ग्रहण गरें जे भएपनि मैले एउटी सत्र वर्षकी काँची तरुनीलाई थोरैमात्र भएपनि सन्तुष्ट पार्न सफल भएको थिएं । निकैबेरसम्म लीला पनि उत्तानो परेर सिलिङ्ग हेर्दै रही म पनि त्यस्तै ।आधा घण्टाको समय जस्तो त्यतिकै बितेपछी लीला कोल्टे फर्कदैं मेरो तिघ्रामाथी आफ्नो खुट्टा राख्दै
भनि “ड्याड !” “हुँ…” “व्हाटेभर यु डिड… वि फिल असेम्ड बट मलाई मजा पनि लाग्यो…” “नानी ! छोड् यि कुरालाई… अब सम्झेर केहि फाइदा छैन… यो एउटा नराम्रो घट्ना मात्र हो भनेर सम्झ…” “त्यो त म गर्छु कि… तर एउटा कुरा भन्नु त ? मलाई तेत्रो गरिन्जेल तपाईले एकपटक पनि छोरी देख्नुभएन है… ?” “तिमीले तेसो नगरेको भए आज अनर्थ नै हुनसक्थ्यो ?” यतिखेर लीलाको हात झण्डै मेरो लाँडोको माथी थियो र अझै पनि मेरो लाँडो ठन्किरहेको थियो । “भोलीदेखि यी कुरा स्टप गरौंला तर एउटा कुरा भन्नु त ? तपाईको एक्टिभिटिले मैले त आफूलाई हल्का फिल गरें तपाईले फिल गर्नुभयो कि भएन ?” “आधा घण्टामात्र ढिलो तिमीले गरेकी भए म पनि हल्का त हुन्थें तर तिम्रो र मेरो रिलेसन् कहाँ पुग्थ्यो होला… छोड यी कुरा…” “आधा रिलेसन त तपाईले बिगारिसक्नुभयो छोरीलाई स्वास्नीको रुपमा हेरेर…
(अनि मेरो लाँडोमाथी हात राखेर लाँडोलाई ट्राउजर माथीबाटै समाएर) मैले फिल गरेजस्तै तपाई पनि गर्नुहोस् म हेल्प गर्छु तपाईलाई ..” भन्दै लाँडो खेलाउन थाली । मैले लीलालाई रोक्ने कोशिस गरें तर लीलाले भनि “लेट्स थिङ्क आई एम योर वाईफ फर हाफ एण्ड आवर…” त्यसपछी आफ्नो टि-शर्ट माथी सारेर बुब्स बाहिर निकाली अनि ट्राउजरभित्रै हात छिराएर मेरो लाँडो समाउँदै भनि “इट्स टु बिग…” मैले पनि अब सहजताका साथ लीलालाई आफ्नो हमविस्तर बनाउँन सक्छु भन्ने हेतु भनें “ल त्यसोभए आज सबैकुरा बिर्सेर तिमी मेरो स्वास्नी बन्छ्यौ त ?” “तपाईले बनाई त सक्नुभयो… बट आई डु ओरल ओन्ली…” त्यसपछी लीला मेरो कमरनिर झुकि र मेरो लाँडो मुखमा लिएर आईसक्रिमझै गरि चुस्न थाली, लीलाले मेरो लाँडो मात्र नभएर अण्डकोष समेत खेलाउँदै चुसि । म
लीलाको बुब्स खेलाउने कोशिस गरिरहेको थिएं तर सफल हुन सकिन । लीलाले मेरो लाँडोलाई गजबसँग चुसिरहेकी थिई, मैले भनें “लीला ! आई एम कमिङ्ग… याहऽऽऽ… आई एम कमिङ्ग…” “ओहऽऽऽ… ड्याड ! कम अन माई माउथ… फिल माई माउथ विथ योर कम… आई वान्ट टु टेस्ट योर कम…” म लीलाको मुखमै बिसर्जन भएं ।
चौतारीको शितल हावा खाँदै हामी सँगै बसेका थियौ
उनीप्रति म समर्पित हुने नै भएँ
उनको गाला समाउँदा उनले कुनै प्रतिकार गरीनन
वसमा भेटेकी एक १९ वर्षको महिला
अनि मलाई भेटेर दिन्छु भनेको चिज त दिने होला नि हैन